Izindaba - Ukuhanjiswa komugqa womshini wefilimu womshini wePET
IPLASIKI YOKUFUNDA YOKUGQILA KWAMANDLA
Kusukela yasungulwa ngonyaka we-2002
Umshini wokufakelwa womshini weplasitiki opulasitiki
Umshini wokugcwalisa umshini weplastiki
Umshini wokugcwalisa indophi weplastiki
Umshini wokufakelwa kwezinwele owenziwe ngeplastiki
Umshini wokufakelwa okwenziwe ngeplastiki okwenziwa ngeplastiki
Umshini wokuphrinta we-Plastic cosmetical extruding
Umshini wokufakelwa kwensimbi weplastiki weplastiki
Umshini wokuhlobisa upende weplastiki
Umshini wokugcwalisa weplastiki wetha lokuphepha weplastiki
Umshini wokufakelwa kwelebula ophathwayo weplastiki
Umshini wokugcwalisa womshini weplastiki Nylon
Umshini wokuphrinta we-Plast PET
Isithombe seKhasimende & Umbukiso
Ukuhanjiswa komugqa womshini wefilimu womshini we-PET
NgoJulayi 5, 2020, sahlela ukuthunyelwa kwezinto zokuhlobisa zomugqa wokukhiqizwa ophelele we-PET umshanelo wokufakelwa onikezwe ikhasimende laseTunisia.
Ngenxa yethonya le-COVID-2019, cishe wonke amazwe emhlabeni asebenze ukuvalwa kwamazinga ahlukahlukene ukulawula ukusatshalaliswa kwe-COVID-2019. Kepha ngenxa yokudluliselwa komuntu okuye kumuntu kwe-COVID-2019, ukudluliselwa kushesha, ikakhulukazi emazweni avaliwe umlomo noma angazilandeli izinyathelo zokuqapha zesayensi. Ekuqaleni kukaJulayi, inani labantu abatholakala ne-COVID-2019 emhlabeni wonke lase lifinyelele cishe ku-11,000,000, ukwanda okumangazayo.
Ngaphandle kwalokhu, imikhiqizo yethu ithole imibuzo eminingi kumakhasimende aphesheya, futhi izinga lokuqinisekiswa kwe-oda lihle kakhulu. Umugqa ophelele wokukhiqizwa komshanelo we-PET okwalelwe ikhasimende laseTunisia ekuqaleni kwalo nyaka uqediwe futhi wethulwa ngesikhathi.
Lo msele wokukhiqiza wamukela izinto eziyi-100% ezenziwe kabusha ze-PET, kusuka ezintweni ezinguluhlaza kuya kokwenza kwasebenza ukuthi zisebenze, ukusebenza ngokuzenzakalelayo. Ngoba izinto ezingavuthiwe ziyinto esetshenzisiwe eyenziwe kabusha eyi-100%, izindleko zokukhiqiza ziphansi, ikhasimende lithengisa umkhiqizo womshanelo emakethe futhi inzuzo ibhekwa kakhulu. Ukugcwala okuphuma kulayini kungasetshenziswa futhi ukwenza izinhlobo ezahlukahlukene zamabhulashi nezinaliti zikaphayini zesihlahla sikaKhisimusi, ezinokusetshenziswa okuningana. Sinikezela ngezinsizakalo zokuma eyodwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende, kusuka kumklamo womugqa womshini ukwenza, ukuthunyelwa, ukufakwa kanye nokuthunyelwa ngempumelelo.
Emikhiqizweni yethu, akunandaba kusuka ekuxhumaneni kwabasebenzi kokuqala, ukuqinisekiswa kwe-oda, ukukhiqizwa kwakamuva kanye nokulethwa kwemishini, amakhasimende anelisekile kakhulu. Siyethemba abathengi bangathola imishini ngokushesha okukhulu, bayifaka ekukhiqizweni futhi bathole inzuzo enhle. Lokhu akufikanga kalula ngenxa yomthelela we-coronavirus yomhlaba ekuwohlokeni kwemakethe.
Sizoba nemikhiqizo eseqophelweni eliphezulu, insizakalo esebenza kahle, ukusebenzisana ngokuwina, okunikezelwe ukusetshenziselwa amakhasimende amaningi futhi sakhe inzuzo ecebile yamakhasimende.
Isikhathi sokuthumela: Aug-05-2020
I-Qingdao Zhuoya iMishini Co, Ltd iyinhlangano enkulu kakhulu yesayensi nezobuchwepheshe ehlanganiswe nocwaningo nentuthuko, ukwakhiwa, ukuthengiswa kanye nezinsizakalo
Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu noma nge-pricelist, sicela ushiye kithi futhi sizoxhumana kungakapheli amahora angama-24.